ခရီးသည်တင်ယာဉ် လူကိုတိုက်ပြီး ဓာတ်တိုင်အား ထပ်တိုက်မှု ဘုရင့်နောင် လမ်းမပေါ်ဖြစ်ပွား - Yangon Media Group
ခရီးသည်တင်ယာဉ် လူကိုတိုက်ပြီး ဓာတ်တိုင်အား ထပ်တိုက်မှု ဘုရင့်နောင် လမ်းမပေါ်ဖြစ်ပွား
ဘုရင့်နောင်လမ်း ပေါ်ရှိ သင်္ဘောကျင်းအိမ်ရာရှေ့ တွင် YBS(၈၅) ယာဉ်သည် လမ်း လျှောက်နေသည့် လူကိုဝင်တိုက်ပြီး ဓာတ်တိုင်အား ထပ်မံတိုက်ခဲ့သည်။ မေ ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာ ရီခွဲခန့်က ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဘုရင့် နောင်လမ်းအတိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်မှ ဘုရင့်နောင်ဘက်သို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ယာဉ်မောင်း ဟိန်း ပြည့်သူရိန်မောင်းနှင်လာသော YBS(၈၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် သင်္ဘောကျင်းအိမ်ရာရှေ့ အရောက် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ယာဘက်လမ်းဘေးတွင် လမ်းလျှောက် နေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအားတိုက်ပြီးနောက် ဓာတ်တိုင်ကို ထပ်မံဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင်ယာဉ်မှုစစ်အဖွဲ့မှ ယာဉ်ထိန်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယာဉ်တိုက်ခံရသည့် အမျိုးသားမှာ ခြေထောက်တွင် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူနေကြောင်း၊့ြှ(၈၅) ယာဉ် ပေါ်ရှိ ခရီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ် တိုင်လည်းကျိုးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ယာဉ်မှု စစ်အဖွဲ့မှ ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးက ”သင်္ဘောကျင်းအိမ်ရာရှေ့ ရောက်တော့ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းလျှောက်တဲ့လူကိုတိုက်တယ်။ ဓာတ်တိုင်ထပ်တိုက်တယ်။ ယာဉ် မောင်းကို စစ်ဆေးနေတယ်။ ပျက် စီးဆုံးရှုံးမှုကတော့ ယာဉ်ပိုင်ရှင် မေးမှသိရမယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ပြောသည်။ ယင်းယာဉ်တိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း တွင် ယာဉ်မောင်းကို အမှုဖွင့်ရန်စီ စဉ်နေကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။
မေ ၂၆ ရက် ညပိုင်းကလည်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ညောင်တုန်းလမ်းအတိုင်းမောင်း လာသော YBS (၆၁) ယာဉ်သည် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ (၁) ထိပ် မှတ်တိုင်အရောက် လမ်းဖြတ်ကူးသူသားအမိနှစ်ဦးအား ဝင်တိုက်ခဲ့ရာ တစ်နှစ်ခွဲအရွယ် သမီးဖြစ်သူမှာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ သေးသည်။၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဧပြီအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု ၉၇၉ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၈၇ ဦးသေဆုံးကာ ၁၂၄၈ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
မိုးဦးရာသီ ကာလတွင် သတ်မှတ် စည်းကမ်း လိုက်နာမှုမရှိသည့် ရေယာဉ်များအား စစ်ဆေးအရေးယူမှုများေ??
မန္တလေးမြို့တွင် အနုပညာ ဖန်တီးမှု ပညာများနှင့် အတွေ့အကြုံများ မျှဝေ
ရခိုင်ပြည်ရှိ IDP စခန်းများတွင် နေထိုင်သူ တစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော် ရှိနေဆဲဖြစ်
အောင်လံ ဘူတာမှ ပုဂံ-ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်-ပြည်သို့ ရထားစီးခရီးသည် ယခင်ထက်များလာ
မြဝတီမြို့၌ လောင်းကစားမှု ပပျောက်ရေးအတွက် သံဃာတော်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူအင်အား ၄ဝဝ ခန့် ဆန္ဒ ?
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုရလာ၍ နီပေါစက်ရုံများ ကုန်ပို၍ တိုးထုတ်လာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ခရီးစဉ်တွင် တိုင်တန်းခဲ့သည့် လက်ပံတောင်းဒေသ၌ မြေ၊ ရေ၊ လေ ပျက်စီးမှုကိစ္စကို